Wasiirka Ciyaaraha Taliyaaniga Ayaa Sheegay Inaysan Jirin Damaanad Qaad Ku Saabsan Soo Laabashada Horyaalka Dalkaasi Ee Serie A? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Wasiirka isboortiga ee Italy ayaa ka digay inaysan jirin wax dammaanad qaad ah oo ku saabsan soo laabashada Serie A inkasta oo ay jiraan qorshayaal lagu yareynayo talaabooyinka xidhida.
Axadii shalay waxaa Raiisel wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ku dhawaaqay in wadanku uu bilaabi doono inuu nasiyo xadidaada, iyadoo la soo sheegay inuu hoos u dhacay kiisaska coronavirus.
Jadwalka ayaa u oggolaanaya kooxaha kooxaha isboortiga in ay dib u bilaabaan tababarka kooxda marka la gaaro May 18, inkasta oo ay jiraan tallaabooyin fogeeya bulshada dhexdeeda.
In kasta oo tallaabada noocan oo kale ah ay muujineyso ku soo laabashada shay u ekaa mid caadi ah, wasiirka isboortiga Vincenzo Spadafora wuxuu ku booriyay taxaddar maadaama masiibada COVID-19 ay wali khatar tahay.
Waxaan dib u bilaabi doonaa tababarka isboortiga kooxda laga bilaabo 18-ka May, laakiin kaliya haddii shuruudaha amniga iyo amniga la xaqiijin karo toddobaadyada soo socda, “ayuu u sheegay Rai 1, iyadoo Serie A la joojiyay bishii Maarso.
Ma doonayo inaan ciqaabo ama aan gaabiyo dib-u-soo-nooleynta kubbadda cagta, laakiin waa inaan dhahnaa waan arki doonaa maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in la adkeysto qawaaniinta iyo xeerar gaar ah oo ku saabsan amniga ciyaartooyda.
“FIGC (Xiriirka Kubadda Cagta Talyaaniga) ayaa soo bandhigay borotokool xalay, guddiga saynisku waxay u arkeen inaysan ku filnayn, sidaa darteed waxay u baahan tahay is-beddel. Kaliya xilligaas, marka la ogolaado borotokoolka, waxaan go’aan ka gaari karnaa haddii dib loo bilaabo kubada cagta iyo in kale.
Waxaan ognahay in dunida kubada cagta ay u qalanto ixtiraam iyo taageero, maadaama ay tahay mid kamid ah ilaha dhaqaale ee ugu weyn dalka.
Dalka Talyaanigu wuxuu ka mid ahaa waddammada ay sida weyn u saameeyeen cudurka faafa, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 26,000.